Tifatirayaasha qaabeynta (* Tifaftirayaasha tifaftirka) | Laga soo bilaabo Linux
Alf | | Muuqaal / Shakhsiyeyn, Aplicaciones
Tan iyo markii ay soo baxday Gnome 3, Midnimada y Qolofta Gnome, Waxaan bilaabay raadinta deegaan kale maadaama aanan jeclayn waxa soo baxay, laakiin taasi igama hor istaageyso baaritaanka.
In noocyadii hore ee Ubuntu con gnome2 in badan oo ka mid ah goobaheeda ayaa lagu tafatiray Tifatiraha Gconf, waxtar leh marka utility-ka qaabeynta ku habboon ee software-ka qaarkood aysan bixin qaab lagu beddelo ikhtiyaar; hadda la gnome3, oo leh isdhaafsiyo kala duwan (Mate, Qorfe, Gnome-Shell, Midnimo) dhowr ayaa loo isticmaalaa "Tifaftirayaasha tifaftiraha" o "Tifaftirayaasha qaabeynta".
Mid kasta oo kuwan ka mid ah "Tifaftirayaasha qaabeynta" Waa in laga soo dhex dilaa barta ay u sameysan yihiin, haddii aan ka fulino interface kale ma arki doonno saameyntooda illaa aan ka bilowno is dhexgalka habboon "Tifaftirayaasha qaabeynta" in aan wax ka beddelnay.
Tifatiraha GConf: Loogu talagalay Qoraxda y Gnome-qolof. Waa inaad rakibtaa xirmada tafatiraha gconf, iyo socodsiinta amarka tafatiraha gconf . Xaaladdan oo kale, xitaa haddii isla barnaamijka tifaftiraha la adeegsado, galitaanno kala duwan ayaa loo tafatiri doonaa Qoraxda iyo Gnome-qolof.
Tusaale ahaan, in la beddelo badhannada daaqadda barnaamijka Kordhi / yareeyo / Xidho, ayaa lagu tifaftiray Tifatiraha Gconf: irridda: desktop »gnome» shell ”windows: button_layout loogu talagalay interface-ka Gnome-qolof irridda: desktop »qorfe» windows: button_layout loogu talagalay interface-ka Qoraxda
Si ka duwan wixii ku dhacay gconf-tifaftiraha gudaha gnome2 (isbedeladu markiiba waxay dhaqan galeen) , hadda waa inaan ka baxnaa kalfadhiga oo aan dib u galnaa.
Wixii tafatirka Tifatiraha GConf waxaan isticmaali karnaa aaladda raadinta (Wax ka beddel »Raadinta) kaas oo ka caawiya helitaanka qiime ama magac fure gaar ah.
Mate-conf-tafatiraha: Sida magaceeda ka muuqata waxaa loo isticmaalaa qaabeynta MATE. Isbedelada aan sameyno waxay si dhaqso leh u dhaqan galaan, haddii aan ka fulino dhexgalka ku habboon: MATE.
Tusaale ahaan, isdhexgalka Mate si aad u bedesho badhamada daaqadda barnaamijka Kordhi / yareeyo / Xidho,, waxaa lagu tafatiray Mate-conf-tafatiraha irridda: barnaamijyada »guud» guud: button_layout
Wixii tafatirka Mate-Conf-tafatiraha waxaan isticmaali karnaa aaladda raadinta (Wax ka beddel »Raadinta) kaas oo ka caawiya helitaanka qiime ama magac fure gaar ah.
Tifatiraha DConf: Waxaa loo adeegsaday interface Midnimada. Waa inaad rakibtaa xirmada qalabka dconf, iyo socodsiinta amarka dconf-editor. Isbedelada aan sameyno waxay si dhaqso leh u dhaqan galaan, haddii aan ka fulino dhexgalka ku habboon: Midnimada.
Tusaale ahaan interface-ka Midnimada, si aad u bedesho badhamada daaqada barnaamijka Kordhi / yareeyo / Xidho, ayaa lagu tifaftiray Tifaftiraha Dconf: irridda: org »gnome» shell »overrides: button_layout
Mid kasta oo ka mid ah "Tifaftirayaasha qaabeynta" sida wax loo saxo badhanka_layout Waxay la mid tahay sida loogu sameeyay gudaha tafatiraha gconf en gnome2.
Tafatirka Tifatiraha DConf way ka dhib badan tahay kuwa kale "Tifaftirayaasha qaabeynta" maadaama aysan haysan qalab raadinta oo ka caawiya helitaanka magac ama qiimo muhiim ah oo gaar ah. Sikastaba waa inaad xasuusataa adeegsiga kuwan "Tifaftirayaasha qaabeynta" Maaha habka lagu taliyay in wax laga beddelo dookhyada desktop-ka, laakiin waxay noqon kartaa mid waxtar leh marka adeegga ku habboon ee wax-u-qabadka ee software-ka qaarkood uusan bixin hab lagu beddelo ikhtiyaarrada kasta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » Tifaftirayaasha qaabeynta (* Tifaftirayaasha tifaftirka)
Tifatiraha dconf wuxuu kaloo u shaqeeyaa Pantheon (hoose)
Ku jawaab elruiz1993
Psst, aad u wanaagsan, laakiin waad u xiisay Xfconf waxay la mid tahay inaad dhahdo Tifatiraha Qaabdhismeedka Xfce 😉
Haa, waa run 😀
DNF: Maamulaha Xirmooyinka Fedora 18 ee Cusub